Eriri Optical Distribution Frame Manufacturers & Suppliers - China Fiber Optical Distribution Frame Factory
FTTH gburugburu dobe USB
Eriri optic splice mmechi, ...
Eriri optic nkesa bo ...
Eriri optic dobe cable na ...
Ftth dobe cable ígwè waya ...
Ejiri eriri optic optic (ODF), nke a na-akpọ fiber optic patch panel iji kesaa, jikwaa ma kpuchido eriri eriri n'oge netwọk telecom, n'ime ụlọ akụrụngwa CATV ma ọ bụ ụlọ akụrụngwa. Enwere ike itinye ya na interface nkwụnye dị iche iche gụnyere SC, ST, FC, LC MTRJ, wdg. Metụtara ngwa fiber na pigtails bụ nhọrọ.
Iji jikwaa ọtụtụ fiber optic na ọnụ ala na mgbanwe dị elu karị, a na-ejikọ okpokoro ikuku (ODF) n'ọtụtụ ebe na njikọta na ịtọọ eriri ngwa anya.
Dị ka ihe owuwu ahụ, ODF nwere ike tumadi kewaa abụọ na ụdị, ya bụ rack ugwu ODF na mgbidi ugwu ODF. Wall Mount ODF na-ejikarị ihe eji eme ihe dịka obere igbe nke enwere ike itinye ya na mgbidi ma dị mma maka nkesa eriri na obere ọnụọgụ. Na ogbe ODF na-abụkarị ụdịdị na imewe nwere usoro siri ike. Enwere ike itinye ya na oche ahụ na-enwekwu mgbanwe dịka ọnụọgụ fiber optic na nkọwa.
Jera eriri optic nkesa etiti (ODF) ka nke oyi-akpọrepu ígwè efere site electrostatic spraying technology nke nwere magburu onwe gburugburu ebe obibi kwụsie ike na nkwa maka ogologo oge ojiji. Jera ODF nwere ike ịnabata njikọ eriri 12, 24, 36, 48, 96, 144.
ODF bụ ihe nkesa na-ekesa ngwa ngwa kachasị ewu ewu na nke zuru oke nke nwere ike belata ọnụahịa ma mee ka ntụkwasị obi na ngbanwe nke eriri fiber optic dị n'oge nkenye na ndozi.
Biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị maka ịmatakwu nkọwa gbasara eriri igwe na-ekesa fiber optic.
Ftth ogbe ugwu eriri optic nkesa etiti, ...
Eriri ngwa anya patch panel, 1U-24-SC
19 ogbe ugwu eriri optic nkesa etiti 1U ...